SimulIDE: yako yaunofarira zvemagetsi simulator ... kubva zvino zvichienda mberi | Linux Vakapindwa muropa
Mumablog akawanda vanoitengesa seArduino simulator, asi Simulide Zvakanyanya kupfuura izvozvo. Ichi chirongwa chakanakira vanoda zvemagetsi, DIY, uye vanogadzira, pamwe nevadzidzi. Unogona kunge uchiziva zvirongwa zvakaita seCrocodile Technology yeWindows iyo yaikubvumidza kutevedzera maseketi, uye ayo aishandiswa mune zvimwe zvikoro nemasosi muzvidzidzo zvetekinoroji. Zvakanaka, SimulIDE chimwe chinhu chakadai ...
Su interface iri nyore kwazvo, unongova nekoramu kuruboshwe nezvose zvinhu zvaunogona kudhonza kuti uise mukati mekona kurudyi kuti ugadzire maseketi aunoda. Iwe une kubva kune ekutanga zvigadzirwa zvemagetsi, senge ma resistor, ma transistors, switch, magetsi emagetsi, pasi, ma capacitor, nezvimwewo, kune mamwe macomputer akadai seArduino mabhodhi, LCD skrini, nezvimwe.
Asi hazvisi chete zvinokutendera iwe kuti uvaise iwo pasina anopfuura mamwe mapurogiramu akaita saFritzing. Muna SimulIDE iwe unogona zvakare kuzviedza. Semuenzaniso, kumisikidza kugadzira dunhu rine zvine musoro magedhi, switch uye maLED uye nekudyidzana nemaswitch uye zvichingodaro kuti uone maLED achivhenekera, nezvimwe. Ichi chinhu chinoshanda chinokutendera kuti uedze dhijitari digitali usati waisa panjodzi yekuzviita uchidzidzira uye kuti hazvishande kana kuti chimwe chinhu chakakuvadzwa (kana kungoti nekuda kwekuti hauna izvo zvinhu zvemuviri).
Ehezve, inowanikwa yeLinux nemamwe mapuratifomu. MuLinux une sarudzo yekurodha pasi tarball package (tar.gz) ine bhanari, kana kurodha pasi pasirese AppImage pasuru iyo yaunongofanira kupa mvumo yekuuraya, tinya kaviri pairi uye chirongwa ichi chovhura kugadzirira shandisa…
Saka pasina zvimwe zvekutaura, kana uchida tanga kushandisa ino yakanaka projekiti, unogona kurodha pasuru kana zvinyorwa kubva webhusaiti yepamutemo yeprojekti (Iri mune zvimwe zvitoro zveapp, asi mune mamwe echinyakare shanduro).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » SimulIDE: yako yaunofarira zvemagetsi simulator ... kubva zvino zvichienda mberi